> Resource> iTunes> Olee otú iji tọghata Torrent ka iTunes
Ka idoro iyi nkiri na iTunes maka playback na iTunes ma ọ bụ exporting gị Apple ngwaọrụ, ị nwere ike mgbe niile ebịne kedi nsogbu. Nke a bụ n'ihi na iTunes nanị na-akwado MOV, MP4, na M4V video format, mgbe Torrent fim ndị na-emekarị na AVI, MKV, ma ọ bụ WMV format, ọ bụghị natively-akwado site na iTunes. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ enwe iyi faịlụ na iTunes ma ọ bụ na-egwu ha na gị na iDevice dị ka iPhone, iPad, iPod, wdg, tọghata ha ka ha iTunes-enyi na enyi format mbụ. Iji mee nke a, a pụrụ ịdabere na mfe na-eji video Ntụgharị bụ oké enyemaka.
Iji tọghata iyi ka iTunes, ndammana m nwere ike ikwu Wondershare Video Ntụgharị maka Mac. Nke a vasatail omume bụghị nanị na-enyere iji tọghata vidiyo na iTunes, kamakwa na-enyere gị iji hazie ihe vidiyo site kewara, trimming, cropping, tinye ndepụta okwu, wdg Gịnị bụ ihe ndị ọzọ, ọ na-enye kachasị presets maka iPhone, iPod, iPad, wdg iji mee ka gị akakabarede ukwuu. N'okpuru ebe-abịa zuru ezu ndu, ọ bụ n'ezie dị mfe dị ka 3 nzọụkwụ.
Cheta na: Nke a ndu ewe Mac screenshots, ma ma nsụgharị nwere fọrọ nke nta otu ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Windows onye ọrụ, pịa ebe a maka Windows ọrụ 'Guide.
Nzọụkwụ 1: Tinye iyi faịlụ n'iyi ka iTunes Ntụgharị
1) Pịa "File"> "Ibu Ibu Media Files" iji mara na MTS videos ị chọrọ iji tọghata.
2) Nanị ịdọrọ na dobe gị Torrent videos si oche ma ọ bụ ndị ọzọ na nchekwa n'ime usoro ihe omume.
Ọ bụrụ na ị nwere di na nwunye nke Torrent faịlụ, Ibu Ibu ha ọnụ ịzọpụta oge ma na-ebelata gị akakabarede.
Nzọụkwụ 2: Họrọ ị họọrọ mmepụta
Pịa format akara ngosi na-gbapụta ya mmepụta format ndepụta, na mgbe ahụ họrọ gị họọrọ mmepụta si format ndepụta.
Ị nwere ike ịhọrọ "M4V" site "Video" ma ọ bụ presets maka iPhone, iPod, iPad na "Devices" udi.
Atụmatụ: Video Ntụgharị maka Mac-enyekwa edezi ọrụ nke na-enyere ị gbanwee mmepụta video. Common edezi ngwaọrụ na-nyere: akuku, ewepụtụ, mmetụta, watermark, ndepụta okwu (nnọọ pịa Dezie image button n'akụkụ aka nri nke ọ bụla video item).
Nzọụkwụ 3: Malite iyi ka iTunes akakabarede
Pịa "tọghata" button ka Video Ntụgharị maka Mac na-elekọta iyi ka iTunes nsụgharị ahụ. O nwere ike buru a mgbe, na-adabere file size na nke ukwu.
Ọ bụ ya! Mgbe akakabarede okokụre, ị nwere ike mbubata converted faịlụ ka iTunes were were ma ọ bụ Mbupụ na gị iDevice ugbu a. Gbalịa ya maka free ebe a!
Biko na-ekiri ndị video nkuzi.
The Best Free Torrent Players E Nwere
Olee otú Ọkụ BitTorrent Movies ka DVD
Olee otú ibudata songs si iTunes
Olee otú Download Songs on iTunes
The ụzọ na-album artwork on iTunes
Easy Ụzọ Mgbe iPad Ga-mmekọrịta na iTunes